इन्टरनेटको नाममा भायनेटको ठगीधन्दा : ‘डिभाइस चेन्ज गर्नुपर्छ’ भन्दै ग्राहकबाट २५ सय ठग्दै ! | Diyopost
काठमाडौं, २० मंसिर । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनिहरुले सर्वसाधरणलाई चरम ठगी गरिरहेको पाइएपछि प्रहरी अनुसन्धान केन्द्रीय व्युरो सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । बढी पैसा लिएर कम स्पिड दिने त्यस्ता आइएसपीलाई संभवत व्युरोले केही दिनभित्रै कारबाहीको दायरमा ल्याउने छ । प्रहरी अनुसन्धानमै रहेको ललितपुरको जावलाखेलमा मुख्य कार्यालय रहेको इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनि भायनेटले आफूलाई ठगी गरेको भन्दै एक पीडित दियोपोस्टको सम्पर्कमा आइपुगेका छन् ।
राजधानीको ढुङ्गेअड्डा बस्दै आएका तुलसी सुवेदी (नाम परिवर्तन)ले लाई आफूलाई भायनेट नामक कम्पनिले इन्टरनेट सेवाको नाममा ठगी गरेको आरोप लगाएका छन् ।
‘मैले इन्टरनेट जोडेको ९ महिना भयो । यो नेटमा २ महिनादेखि नै समस्या आउन थाल्यो । मैले बारम्बार कम्पनिको नम्बरमा फोन गरेर नेटमा समस्या आएको बताएँ । उनीहरुले मान्छे पठाएर डिभाइस चेन्ज गर्नुपर्छ भने,’ पीडित सुवेदीले दियोपोस्टसँग भने,‘त्यो डिभाइसको वारेन्टी ६ महिना हुने रहेछ । ६ महिनाको बीचमा ४/५ पटक उनीहरुकै मान्छे आएर डिभाइस चेन्ज गर्न भने मैले डिभाइस जोडिदिनुस् भन्दा उक्त डिभाइसको पैसा २५ सय लाग्छ भन्न थाले । नत्र नेट चल्दैन भनेर धम्काए ।’
फेसबुकमा कमेन्ट गर्न प्रतिवन्ध !
भायनेटले सुवदीलाई सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको आधिकारिक पेजमा कमेन्ट गर्न समेत प्रतिबन्ध लगाएको छ । ‘मैले आफ्नो समस्या राख्दा भायनेटले मलाई फेसबुकमा कमेन्ट गर्न समेत प्रतिबन्ध लगाएको छ,’ सुवेदीले स्कृन सर्ट देखाउँछै भने,‘यो कम्पनिबाट मलाई अन्याय भयो ।’
सपोर्ट चार्ज भन्दै अवैध शुल्क !
सुवेदीलाई भायनेटले दिएको बिल अनुसार उनीसँग सपोर्ट चार्जको रुपमा ६ हजार ५६ रुपैयाँ लिएको छ । त्यति नै शुल्क इन्टरनेट सेवा प्रयोग गरेबापतको देखिन्छ । तर, सपोर्ट चार्जको रुपमा पैसा लिने तर सेवा दिन आउँदा भने कर्मचारीले डिभाइस जोड्नु पर्छ भन्दै पैसा ठग्ने गरेको रहस्य खुलेको छ ।
‘सपोर्ट चार्जको रुपमा ६ हजार ५६ रुपैयाँ लिने अनि इन्टरनेट विग्रीयो भनेर कल गर्दा यो डिभाइस फेर भनेर २५ सय लिनु ठगी हो,’ एक इन्टरनेट विज्ञ भन्छन्,‘यस्ता ठगी विरुद्ध प्रहरीले नै कारबाही गर्नुपर्छ ।’
भायनेटको आधिकारिक टेलिफोन नम्बर ०१–५९७०४४४ मा सम्पर्क गरेर सुवेदील दिएको कष्टोमर आइडी १२०९** बारे सोधपुछ गर्दा सुवेदी अहिले पनि भायनेटकै ग्राहक रहेको फोन उठाउने महिला कर्मचारीले बताइन् ।
सुवेदीलाई भायनेटले गरेको अन्यायको विषयमा भने आफूले बोल्न नमिल्ने उनले बताइन् । समाचारको विषयमा आफूहरुले कुरा नगर्ने समेत ति कर्मचारीले बताइन् । त्यस्तै भायनेटका मालिक विनय बोहोरालाई यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन मोबाइलमा सम्पर्क गर्दा उनले भने फोन नै उठाएनन् ।